Kuratidza zvinyorwa neelebheri Humprecht
Humprecht chateau mudunhu reJičín ine rakasiyana elliptical chivakwa chimiro, yakavakwa muna 1666-1668. Inowanikwa muPLA Bohemian Paradise, inenge 0,5 km kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSobotka, munharaunda ye cadastral yezita rimwe chete.
Humprecht inzvimbo yekuvhiya uye yaive yekugara kwezhizha kwaHumprecht Jan Černín weChudenice, mumiriri weumambo kuVenice. Iyo dhizaini yakagadzirwa naCarlo Lurago nenzira yeMannerism, ine zvinhu zveanonoka Renaissance uye yekutanga Baroque, pamwe sekufananidza kweGalata Tower muConstantinople. Kuvakwa uku, kwakaitika muna 1666-68, kwakatungamirwa naFrancesco Ceresola, akagadzirisawo chateau mushure memoto muna 1678, ndokuiwedza nepasi rimwe. Zvisinei, nheyo dzakawandisa, saka pasi-pasi zvivakwa zvepurazi zvaifanira kuputswa uye nheyo dzakasimbiswa nematombo ejecha. Iyo Golden Crescent yakaiswa pamusoro muna 1829 panzvimbo yeiyo yekutanga yakasarudzika Slavic muchinjiso venhema kuti Heřman Černín akasungwa muTurkey.
Mushure meČernín chateau yakatengwa muna 1738 nemhuri yeNetolický (Václav Kasimir Netolický anobva Eisenberg), asi zvishoma nezvishoma…